PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-06 - IZOPHUMUZA ABADLALI ABAMQOKA I-MANCHESTER CITY
IZOPHUMUZA ABADLALI ABAMQOKA I-MANCHESTER CITY
Ilanga langeSonto - 2019-01-06 - Ezemidlalo -
UMQEQESHI wemanchester City uzonika ithuba abadlali abangavamisile ukuthola isikimu ukuze bazibonakalise ukuthi bakulungele yini ukuqhubeka nokuhlala kule kilabhu.
Icity izobhekana neqembu lama-amesha irotherham United kowefa Cup namuhla ngesonto ngo-16h00 ekhaya. Kulo mdlalo kubhekwe ukuthi icity izigwazele ibhece kwazise le kilabhu kayidume ngalutho futhi ibophele abadlali abasebancane.
Upep Guardiola ololonga icity, uthi uzimisele ngokuphumuza abadlali abavamise ukuthola isikimu bese enika ithuba labo abangasitholi ngenhloso yokuba bamutshengise ukuthi kusabafanele yini ukuthi abagcine.
“Umdlalo esihlule kuwona iliverpool ngo-2-1 ngolwesine uwumunce wonke umsoco kubadlali bami.
"Yingakho kubalulekile ukuthi ngibaphumuze. Lo mdlalo esiya kuwona ngizimisele ngokunika abanye abadlali bethu ithuba ikakhulukazi laba abangavamisile ukuthola isikimu ukuze bangitshengise ukuthi bakulungele yini ukuphakamisa isandla uma ngibabiza.
“Lokho kakuchazi ukuthi ngiyibukela phansi le kilabhu esizodlala nayo, wukuthi ngifuna ukubheka abanye abadlali bami. Sizoyinika indawo yayo le kilabhu ngoba nayo inabadlali abahle,” kusho yena.
Imidlalo yefa Cup isiyonke ehlelelwe ukuba namuhla ngesonto iqhathwe:
Millwall vs Hull City 16h00. Preston North End vs Doncaster Rovers 16h00.
Fulham vs Oldham Athletic 16h00.
Manchester City vs Rotherham United 16h00.
Woking vs Watford 16h00. QPR vs Leeds United 16h00. Sheffield United vs Barnet 16h00.
Newport County vs Leicester City 18h30.
ULEROY Sane oshaye elinye lamagoli imanchester City iguqisa iliverpool ngo-2-1 ngolwesine ungomunye wabadlali okubhekwe baphunyuzwe ngupep Guardiola kowefa Cup.